4shokelay: September 2010
New generation speech!
Wai Hnin Pwint Thon at the British Labour Conference
မဝေနှင်းပွင့်သုန် ၏ မိန့်ခွန်း မြန်မာ ဘာသာပြန်
သူ၏ ဖခင် ကိုမြအေး သည် တခြားသော ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်များနည်းတူ ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၆ဝ ကျော် ကျခံနေရသည်။
ဖေဖေ့ကို ကျမ ပထမဦးဆုံး မြင်တွေ့ဖူးတာကတော့ သံတိုင်တွေကြားက တဆင့် တွေ့ရတဲ့ ထောင်ထဲက အခန်းလေးထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမက ၄ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဖေဖေက ၁၉၈၈ ခုနှစ် စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အရေးတော်ပုံမှာ ပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့တာကြောင့် အကျဉ်းကျခဲ့ပါတယ်။ အခု နောက်ထပ် တခါ ငြိမ်းချမ်းစွာ လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် အရေးအခင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့လို့ ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ်ခွဲ ကျခံနေရပါတယ်။ ဖေဖေက ကျန်းမာရေး မကောင်းပါဘူး။ နှလုံးရောဂါ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ ဆက်လက် အသက်ရှင်ဖို့ အတွက် လိုနေတဲ့ ဆေးဝါးကုသခွင့် မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမ ဖေဖေဟာ မြန်မာပြည်က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၂ဝဝ ကျော်ထဲကမှ တဦးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းသားတွေ အများအပြား နှိပ်စက်ခံနေရပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဆိုးရွားလှတဲ့ အခြေအနေအောက်မှာ ရှိနေကြပြီး သင့်တော်တဲ့ ဆေးကုသခွင့်တောင် မရကြပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ် ကာလအတွင်းမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဦးရေ ၂ ဆ နီးပါး တိုးလာပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ကမ္ဘာကိုပြောနေတာကတော့ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည် တည်ဆောက်နေတာပါ တဲ့။ နိုဝင်ဘာမှာ သူတို့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကို စစ်မှန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ဆောင်ကျဉ်းပေးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆက်ပြီး တည်မြဲဖို့ အတွက် ပုံဖော်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်သားတချို့ အရပ်ဝတ် လဲလိုက်တဲ့ အပြောင်းအလဲပါ။ ဘာမှ ကွာခြားမသွားတဲ့ အာဏာရှင် တမျိုးတည်းကို အရပ်ဝတ်နဲ့ ပုံစံပြောင်းပြီး ကျမတို့ ထပ်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေက ဆက် ရှိနေဦးမှာပါပဲ။
မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေသလဲ ဆိုတော့ ကျမတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဆက်ပြီး အကျဉ်းကျနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပါတီကလည်း ဖျက်သိမ်း ခံထားရပါတယ်။ စစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်ပြီး ပြောတဲ့ ဘယ်သူ မဆို အကျဉ်းချ ခံရပါတယ်။ ဟာသ လုပ်၊ ကဗျာလေး စပ်တာတောင် အကျဉ်းကျခံကြရတာပါ။ မီဒီယာ ဆင်ဆာကလည်း များသထက် များလာနေပါတယ်။
မြန်မာပြည် အရှေ့ပိုင်းက တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု ဒေသတွေမှာ အရပ်သားတွေကို ဝင်ပြီး တိုက်ခိုက်တာတွေ ဆက်ပြီး ရှိနေတုန်းပါ။ စာသင်ကျောင်းတွေကို ဖျက်ဆီးခံရတာ၊ ရွာတွေ မီးရှို့ခံရတာနဲ့ ကလေးတွေ၊ ကလေး ငယ်ငယ်လေးတွေပါ မကျန် ပစ်သတ်ခံရတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေအတွင်း Burma Campaign UK က လက်ခံ ရရှိထားတဲ့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ကျေးရွာပေါင်း ၃၅ဝဝ ထက်မက ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ စစ်အာဏာရှင် တွေက ကျမတို့ နိုင်ငံ အတွက် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာကို ဘယ်တော့မှ သူ့အလိုလို စွန့်လွှတ်မှာ မဟုတ်တဲ့၊ လူမဆန်တဲ့၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှတဲ့ လူသတ်သမားတွေရဲ့ လုပ်ရပ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေဘာပါတီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့ လေဘာအစိုးရကို ကျမက ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားချင်ပါတယ်။ လေဘာအစိုးရ (UK) ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်အုပ်စုရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံတဲ့ အကြောင်း ကြေညာတဲ့ ပထမဦးဆုံး အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ အနေနဲ့ ဒီထက် ပိုပြီး အရှိန်ပြင်းတဲ့ တွန်းအားတွေနဲ့ ဆက်လက် ဦးဆောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဥရောပ သမဂ္ဂက ပစ်မှတ်ထား စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ဖို့၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်နက် ရောင်းချမှု ပိတ်ပင်ဖို့ တို့အတွက် ဖိအားပေး လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှုကို ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မရှိဘဲ လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ထောက်ခံအားပေးမှုအတွက် လေဘာအစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Mr Gordon Brown, နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်း Mr David Miliband တို့ကို အထူးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကျမ ပြောကြားပါတယ် (လက်ခုပ်သံများ)။ ဒီအတွက် ကျမတို့ တကယ်ပဲ ဝမ်းမြောက် ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ကိုတော့ ဒီလို မပြောနိုင်ပါဘူး။ UN အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဆီက မြန်မာနိုင်ငံ အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မိကြောင်း ပြောကြားချက်တွေ မကြာခဏ ကြားရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာလုပ်ဆောင်ချက်မှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်နေပါတယ်လို့ ထပ်ခါတလဲလဲ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ ကတိမတည်ပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ UN ကလည်း အခြေအနေ အပြောင်းအလဲကို “စောင့်ကြည့်ရအောင်” လို့ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောခဲ့တာပါပဲ။
သူတို့ စောင့်ကြည့်နေတုန်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေက ထောင်ထဲမှာ သေနေကြပြီ။
သူတို့ စောင့်ကြည့်နေတုန်း အမျိုးသမီးတွေ မုဒိမ်းကျင့်ခံနေရပြီ။
သူတို့ စောင့်ကြည့်နေတုန်း နောက်ထပ် ရွာတွေ မီးရှို့ခံနေရပြီ။
မျိုးဆက် တခုပြီးတခု ကလေးတွေက ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေ၊ အကြောက်တရားတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကလေးဘဝ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ UN နဲ့ တခြား အစိုးရတွေက ဒါကို လစ်လျူရှုပြီး ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်ဘဲ နေမြဲတိုင်း နေနေကြတယ်။ ဒီလို အဖြစ်ဆိုးတွေကို ဆက်ပြီး လက်ခံနေလို့ မဖြစ်ဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက ဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသူတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မှန်ကန်တဲ့ ဖိအား မပေးနိုင်သေးလို့ပါ။ နိုင်ငံတကာ ဖိအား ဆက်ပြီး ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် တို့နဲ့ ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်လာအောင် ဖိအား မှန်သမျှကို သုံးဖို့ လိုပါတယ်။ ပိုမို ပြင်းထန်တဲ့၊ ပစ်မှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု လိုအပ် ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုကို ဒီလို စေ့စပ်ရေး အတွက် ဖိအားပေးဖို့ UN ဦးဆောင်တဲ့ စေ့စပ် ဆောင်ရွက်ရေး အောက်မှာ ကျမတို့ ကမ္ဘာကြီး တခုလုံး ညီညွတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ UN ကော်မရှင်က မြန်မာပြည်ကို သွားပြီး စစ်အုပ်စုရဲ့ လူသားတွေအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ကမ္ဘာ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကို ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီး ပြီးသွားရင် ကျမအဖေတို့ကို ထောင်ထဲ သွင်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေ အပါအဝင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ထောက်ပံ့ပြီး မတရား ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေ အားလုံး တရားဝင် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ တခါတလေ ကျမမှာ မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့သလောက် နီးပါး ခံစားရမိပါတယ်။ တခါတလေ ကျမအဖေကို ကျမတသက် ဘယ်တော့မှ ပြန်တွေ့နိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမဟာ ကျမအဖေရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိမှုကို အမှတ်ရနေပါတယ်။ သူဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဝေဒနာ ခံစားနေရပါစေ သူဘယ်တော့မှ ယုံကြည်ချက်ကို စွန့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ကျမ သိနေတယ်။ ကျမတို့ဟာ လွတ်လပ်မှုရဲ့ အောင်ပွဲကို ဆင်နိုင်မယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ ဒီအတွက် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အကူအညီကို လိုအပ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ဟာ တောင်အာဖရိကကို အကူအညီပေး ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်မှု အတွက်လည်း အကူအညီ ပေးကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။﻿
(အထက်ပါ မိန့်ခွန်းကို လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေသော အီးမေးလ်မှတဆင့် ရရှိပါသည်။ မိုးမခက အနည်းငယ်ပြန်လည် တည်းဖြတ်ထားပါသည်။မူရင်း မိန့်ခွန်းကို အထက် Video File တွင် ကြည့်ရှု နားဆင် နိုင်သည်။)
Posted by 4shokelay at 2:06 AM No comments:
Posted by 4shokelay at 2:08 AM 1 comment:
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်ဒေသရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းကျောင်းသားများ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်အတူ ကျင်းပခဲ့ကြသည့် ဓာတ်ပုံ
Photo copy from www.khitpyaing.org
Posted by 4shokelay at 1:42 AM No comments:
Boycott Vol -4-
Boycott 2010 Vol-4
Posted by 4shokelay at 9:31 PM No comments:
What is 2010 Burma election?
photo copy from alinsek.blogspot.com
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် ရက်ထွက်ပေါ်လာပြီ.... ၇ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀............
ကိုက်ဖဲကိုယ်ချိုးပြီး ကြံဖွံ့ပါတီကလဲ အားရပါးရကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေသုံးပြီး စည်းရုံးရေးတွေဆင်းနေကြပါပြီ.. အဖြည့်ခံပါတီတွေ ကလဲအဟုတ်ကြီးထင်ပြီး အားကြိုးမာန်တက်တွေလှုပ်ရှားနေကြပြန်ပါပြီ။
ရွေးကောက်ပွဲ နှင့်ပက်သက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါတီ NLD ကတော့ မြန်မာပြည်နှင့် မြန်မာပြည်သူများ အနာဂတ်ကို ကြည့် ပြီး ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာချက် အတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံ ပါဝင်ပက်သက်မှုလုံးဝမရှိပဲ ရဲရင့်စွာပင် ခေါင်းခါနေကြပြီ။ ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာချက်ကို ထောက်ခံပြီး အတိုက်အခံ ဒိမိုကရေစီအင်အားစုများကလဲ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက် နေကြပြီ။
NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင် ကလဲ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ မဲမပေးလို့ ရကြောင်း။ အားလုံးကမဲသွားမပေးကြရင် ကမ္ဘာ့ဆင်မြင့်ပေါ်မှာ.. ကမ္ဘာ့မျက်မှောက်မှာ... ဗမာပြည်ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေမျက်မှောက်မှာ အမြင်ထဲမှာ သည်လူတွေဟာ ဘယ်လိုမှတရားမဝင်တော့ဘူး၊ ဂုဏ်သရေမရှိတော့ဘူး၊.... သူတို့အာဏာသူတို့ဖာသာ ဖန်တီး သူတို့ ဟာသူတို့တက်လာတဲ့ လူတွေကလတိုင်းပြည်အကြိုးကို ဘာမှမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူး ဆိုတာလူတွေသိမြင်လာလေ့မယ်။ အဲဒီအခါ... ရှေ့ဆက်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘို့ တော်လှန်ဘို့ ကျနော်တို့အားတွေပိုရှိလာလေ့မယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကို မဲမပေးကြရေး ပြောသွားပါတယ်....
နောက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ အထဲက ပါတီတချို့က ပါတီဝင်တွေလဲ ခုဆိုရင် ဘာလဲဆိုတာသိကုန်ကြလို့ ထွက်သူတွေထွက် ကုန်ကြပါပြီ။ ပြည်တွင်း အတိုက်အခံကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာနောက်ပိုင်း ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Generation Wave လိုအဖွဲ့ အစည်းတွေကလဲ ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်ဖို့၊ မဲမပေးကြဖို့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ကိုဆန့်ကျင်ကြဖို့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကမ်ပိန်းတွေလုပ်ပြီး လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ....
မြန်မာပြည်၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြီးကပြောရရင် လုပ်ပွဲကန်ဘို့ ညှိထားတဲ့ ရက်ကွက်ဘောလုံးပွဲ တခုလိုပါပဲ။ ကန်မယ့်အသင်းသားတွေကလဲ Final Result ကိုကြိုသိနေ ဒိုင်လူကြီးကလဲခေါက်ဆွဲစားဒိုင် ဖြစ်နေ ။ ဒီပွဲသတင်းကလဲ ရပ်ကွက်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်၊ ကွမ်းယာဆိုင်၊ သေရည်ဆိုင် တွေမှာပါပြန့်နေတော့ သွားကြည့်ရမယ့် ရပ်ကွက်သားတွေအတွက်တော့ မကြည့်ကြရုံပဲရှိတော့တာပေါ့ဗျာ........
မှတ်ချက်။ ။ မှတ်မိကြသေးရဲ့လား အရင်-၁၉၉၀ တုန်းကလဲ တို့ရပ်ကွက်အသင်းဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လေ။ တို့အသင်းပဲနိုင်ခဲ့ဒါပေမယ့် ဒိုင်းကိုတော့နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လှည့်ပဲ့ပြီး မပေးခဲ့ဘူးလေ။
Posted by 4shokelay at 11:45 PM No comments:
Labels: သတင်း, ဆောင်းပါး, ပေးပိုစာ
For 2010 military general election
Pamphlet Boycott (08!09!10)
Sticker Boycott (08!09!10)
Posted by 4shokelay at 2:18 AM No comments:
Boycott vol -3 -
Posted by 4shokelay at 2:04 AM No comments: